Supply Shower Thermostatic ရောနှောအဆို့ရှင်၊ အပူထိန်းကိရိယာ Bath Shower Mixer၊ အရည်အသွေးမြင့်အပူထိန်းကိရိယာရောနှောအဆို့ရှင်။
SHENZHEN KING OF SUN INDUSTRY CO.,LTD [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer , Trade Company အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , Other Markets , West Europe , North Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:81% - 90% Cert:ISO9001, CE, Test Report ဖေါ်ပြချက်:ရေချိုးခန်းအပူထိန်းညှိရောနှော Valve,အပူထိန်းကိရိယာရေချိုးရေချိုးခန်းအရောနှော,အပူထိန်းကိရိယာအရောအနှောအဆို့ရှင်,ရေချိုးခန်းအပူထိန်းကိရိယာ Shower Taps,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ရေချိုးခန်းအရောနှော > အပူထိန်းကိရိယာအရောအနှော
အပူထိန်းကိရိယာအရောအနှော ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ရေချိုးခန်းအပူထိန်းညှိရောနှော Valve, အပူထိန်းကိရိယာရေချိုးရေချိုးခန်းအရောနှော ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, အပူထိန်းကိရိယာအရောအနှောအဆို့ရှင် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ထိန်းညှိနိုင်သော Lfting လှံတံနှင့်အပူထိန်းကိရိယာ Shower Set
တံတောင်ဆစ် Spout အမျိုးအစားအပူထိန်းအပူအအေးခံဆေးရောနှောဆေး
Cylindrical Thermostatic Shower Mixer အသာပုတ်ပါ
ကြေးဝါ Chromed ခေတ်ပြိုင်အပူထိန်းကိရိယာ Shower Mixer Faucets
ကြေးဝါစတုရန်းအပူထိန်းကိရိယာ Shower Set
စတုရန်းအပူထိန်းအပူအအေးခံရေချိုးခန်းရေချိုးဆေးရောနှောဆေး faucet s
Slide Rail Kit နှင့်အတူအပူထိန်းကိရိယာ Shower Mixer
Cylindrical Shower Rod နှင့်အတူရင်ဘတ်အပူထိန်းကိရိယာ Shower Set
ကြေးဝါအပူထိန်းကိရိယာ Faucet နှင့်အတူအပူထိန်းကိရိယာ Shower Set
Liftable လှံတံနှင့်ရိုးရှင်းသောအပူထိန်းကိရိယာ Shower Set
All-match အနက်ရောင်အပူထိန်းကိရိယာ Shower Simple Suits
ရေတံခွန် Spout အပူထိန်းကိရိယာရေချိုးခန်းအရောအနှော
Shower Faucet ရေချိုးခန်းအပူထိန်းညှိရေချိုးခန်းအရောအနှော
Shower Thermostatic Faucet ကြေးဝါရွှေရောင် Shower
အိမ်တွင်ရေအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းပါက Thermostatic Shower Mixer အသာပုတ် ခြင်းသည်ပုံမှန်အသုံးပြုမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမည့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုပြီးနောက်ချိန်ခွင်ကိုအလွယ်တကူထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ နှင့် T hermostatic Bath Shower Mixer အသာပုတ်ပါ Handy ၏ယေဘုယျအားဖြင့်ဤအခြေအနေမရှိပါ။ အကြောင်းမှာ Handy သည်အထူးမျက်နှာပြင်ကုသမှုနှင့်...
Handy's အပူထိန်းကိရိယာအရောအနှော ပုတ်ပါ တစ်ကြိမ်သာသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ပြီးအပူချိန်ကိုမပြောင်းလဲဘဲထပ်ခါတလဲလဲသုံးနိုင်သည်။ သင်အပူထိန်းကိရိယာဗာပန်းရေချိုးခန်းရောနှော faucet s မှာဖွင့်တိုင်းဟာထွက်ပေါက်ရေသင်မသတ်မှတ်အပူချိန်ဖြစ်ပြီး, အပူချိန်စောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲလျင်မြန်စွာစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။...
Handy's Thermostat ic Shower Mixer Faucets သည်နည်းပညာဆိုင်ရာအားသာချက်များ (၃) ခုရှိသည်။ အပူတိုက်ခြင်း၊ ကြာရှည်ခံခြင်းနှင့်ကြာရှည်ခံခြင်း။ ဖောက်သည်များသည် Cylindrical Thermostatic Shower Mixer ကို ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရပြီးပိုမိုကြာရှည်ခံ စေရန်အတွက်အသုံးပြုသည် ။ Handy's အပူထိန်းကိရိယာ Shower Faucet...
အပူထိန်းကိရိယာနည်းပညာသည်အထူးသဖြင့်အသစ်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အပူအအေးခံရေချိုးဆေးရည်ရောနှောတပ်ဆင် ရန် ၀ ယ်လိုအားသိသိသာသာမြင့်တက်ခဲ့ပြီးယင်းကြောင့်သူတို့၏စျေးနှုန်းများသိသိသာသာကျဆင်းခဲ့သည်။ မြို့ရိုးကိုအပူထိန်းကိရိယာ s ကို hower မီတာ ixer ဘုံဘိုင်အဟောင်းနှင့်အသစ်သောအကြောင်းအရာသည်အကြား install...
ရေပူရေအေး နှင့်အတူ အပူထိန်းအပူအအေးခံကိရိယာကိုအသုံးပြုထားသောရေပူရေမှုတ်စက် သည်အလွန်ရေပန်းစားသည်။ ကြေးဝါကိုအဓိကကိုယ်ထည်, 1.5 ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပိုက်နှင့်ကိုင်ဆောင်သူနှင့်အတူ SMA နွေဦးအပူထိန်းကိရိယာရေချိုးခန်းရောနှောအဆို့ရှင်, ပလပ်စတစ်လက်ကိုင်ရေချိုးခန်းဦးခေါင်းမှာ chrome finish ကိုပွတ်။ အပူအအေးခံရေချိုးခန်းအရောအနှော...
Handy ၏ ရွှေအပူထိန်းကိရိယာရေချိုးခန်း faucet သည်အတွင်းပိုင်းအပူထိန်းကိရိယာအဆို့ရှင်၏ဗဟိုမှတစ်ဆင့်ရေတိုရေပူနှင့်ရေပူများ၏အလိုအလျောက်ချိန်ခွင်ကိုအလိုအလျောက်ချိန်ညှိနိုင်ပြီးသင်အသုံးပြုသောအချိန်တိုင်းလက်စွဲစာအုပ်ကိုညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ပါ။...
ကြေးဝါစတုရန်းအပူထိန်းကိရိယာ Shower Set Handy's Square Thermostatic Shower Faucet ကိုကြေးဝါဆွဲငင်အားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဒုတိယမျိုးဆက်မှတ်ဉာဏ်အလွိုင်းနွေ ဦး အပူထိန်းကိရိယာအဆို့ရှင် core ကိုအသုံးပြုသည်။ Brass Thermostatic Shower Kit သည်ခိုင်ခံ့ပြီးကြာရှည်ခံသည်။ စတုရန်းပုံသဏ္ visာန် သည်အမြင်အာရုံကိုပိုမိုဖက်ရှင်ကျ။...
စတုရန်းအပူထိန်းအပူအအေးခံရေချိုးခန်းရေချိုးခန်းအရောအနှော ဒီအပူထိန်းအပူအအေးပေးစက်သည်အလွန်ရေပန်းစားပြီး၎င်း၏စတိုင်နှင့်ခံနိုင်ရည်ဒီဇိုင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြေးဝါ၏အဓိကကိုယ်ထည်၊ polished chrome finish၊ ပလပ်စတစ်ရေချိုးခန်းခေါင်းသို့မဟုတ်သံမဏိရေချိုးခန်းခေါင်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။...
မိုးရေချိန်အပူထိန်းကိရိယာရေချိုးခန်းအရောအနှော တစ်ချိန်တည်းမှာမိုးရွာသွန်းမှုအပူအအေးခံရေချိုးခန်းရေချိုးခန်းရောနှောခြင်းကသင့်အားကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့်ရေအပူချိန်ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်အိမ်သာကိုသုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားထိပုတ်ပါကအပူပေးစနစ်သည်ရေကိုအမြဲတမ်းအပူရှိန်တွင်ထိန်းထားနိုင်သည်။...
Slide Rail Kit နှင့်အတူအပူထိန်းကိရိယာ Shower Mixer Cylinder ကြေးဝါ၏အဓိကကိုယ်ထည်၊ SMA spring thermostatic ရေချိုးခန်းအဆို့ရှင်၊ အပူအအေးခံရေချိုးခန်းအရောအနှောရှိခြင်းသည်သင့်အားကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့်ရေအပူချိန်ကိုရွေးချယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး...
ဆလင်ဒါအပူထိန်းကိရိယာရေချိုးခန်းအရောအနှော အပူအအေးခံရေချိုးခန်းအရောအနှောရှိခြင်းသည်သင့်အားကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့်ရေအပူချိန်ကိုရွေးချယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကအိမ်သာကိုသုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားထိပုတ်ပါကအပူထိန်းစနစ်ထိန်းချုပ်ခြင်းသည်ရေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်တွင်ထိန်းထားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားစိတ်ချရသောရေချိုးရန် (သို့)...
Rectangle အပူထိန်းညှိရေချိုးခန်းအရောအနှော Rectangle အပူအအေးခံဆေးရောနှောခြင်းသည်အလွန်လူကြိုက်များ။ ၎င်း၏ဇိမ်ခံစတိုင်နှင့်တာရှည်ခံမှုဒီဇိုင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြေးဝါ၏အဓိကကိုယ်ထည်၊ polished chrome finish၊ ပလပ်စတစ်ရေချိုးခန်းခေါင်းသို့မဟုတ်သံမဏိရေချိုးခန်းခေါင်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။...
နံရံကပ်တပ်ဆင်ထားသည့်အပူအအေးခံဆေးရောနှောစက် အပူထိန်းကိရိယာနည်းပညာသည်အထူးသဖြင့်အသစ်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအပူရေညှိရေချိုးစက်၏ ၀ ယ်လိုအားသိသိသာသာမြင့်တက်ခဲ့ပြီးယင်းကြောင့်သူတို့၏စျေးနှုန်းများသိသိသာသာကျဆင်းခဲ့သည်။...
Cylindrical Shower Rod နှင့်အတူရင်ဘတ်အပူထိန်းကိရိယာ Shower Set Handy's chrome Thermostatic Shower Kit သည်ရာသီဥတုအေးသောအချိန်တွင်ရေသောက်သောအခါရေပူနှင့်ရေအေးအပူချိန်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။ Square Thermostatic Shower Taps...
ကြေးဝါအပူထိန်းကိရိယာ Faucet နှင့်အတူအပူထိန်းကိရိယာ Shower Set နေရာလေးကိုရဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်ပန်းရေချိုးခန်း Kit တားဆီးအအေးမိသို့မဟုတ်မီးလောင်ဒဏ်ရာကြောင့်ရေချိုးခန်းစဉ်အတွင်းလည်းရေအေးအပူချိန်ရန်, စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန် B ကို rass အပူထိန်းကိရိယာပန်းရေချိုးခန်းရောနှော၏ခေတ်သစ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်လိုအလြောကျထိုကဲ့သို့သော 38...
Liftable လှံတံနှင့်ရိုးရှင်းသောအပူထိန်းကိရိယာ Shower Set Handy's Thermostatic Mixing Shower faucet သည်အချိန်တိုအတွင်းရေငွေ့နှင့်ရေပူများ၏ဖိအားကိုလက်ငင်းညှိနှိုင်းခြင်းမရှိပဲအလိုလျောက်ထိန်းညှိပေးနိုင်သည်။ ကစဉ်ဆက်မပြတ်ရေအပူချိန်သေချာနိုငျသောကွောငျ့လူကိုခစျြတာဖြစ်ပါတယ် faucet အပူထိန်းကိရိယာရေချိုးခန်း;...
All-match အနက်ရောင်အပူထိန်းကိရိယာ Shower Simple Suits Handy's Black Thermostatic Shower Mixer သည်အလွှာ ၅ လွှာပါသော electroplating process နှင့် baking varnish ကိုအသုံးပြုသည်။ အသွင်အပြင်သည်အမည်းရောင်၊ တည်ငြိမ်။ လှပသော၊ ဖုန်မှုန့်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးသင်၏ရေချိုးခန်းအလှဆင်ပုံနှင့်ကိုက်ညီရန်လွယ်ကူသည်။...
စတိုင်ကြေးဝါစတုရန်းအပူထိန်းကိရိယာ Shower စျေးကွက်အပေါ်အပူထိန်းကိရိယာရေချိုးခန်း faucets ယေဘုယျအားဖြင့်မြင့်မားသောအပူချိန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးခလုတ်ကိုရှိသည်။ Handy ၏ စတုရန်းအပူအအေးခံကိရိယာအစုံ သည်အအေးထိနည်းပညာ၏မူပိုင်ခွင့်ပုံစံဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီး ကြေးဝါ အပူထိန်းကိရိယာ Shower Faucet ၏ဘယ်ဘက်နောက်ဘက်ရှိအ ၀...
ရေတံခွန် Spout အပူထိန်းကိရိယာရေချိုးခန်းအရောအနှော ထုံးတမ်းစဉ်လာအရမိုးရေများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ရေပူများနှင့်ရော။ ဘေးကင်းမှုအန္တရာယ်များရှိနိုင်သည်။ Handy's Thermostatic ရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းက ကလေးငယ်များနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သောအပူချိန်မှာရေကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ Waterfall Spout...
တစ်ခုတည်းသောကိုယ်ထည်အပူထိန်းကိရိယာရောနှောဆေးရောနှောခြင်း၊ အဆင့်မြင့်သောကြေးဝါကိုဤအရည်အသွေးမြင့်မားသောအရောအနှောတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည်ကြာရှည်ခံသည့်ရေစုပ်တံနှင့်ကြေးဝါရေချိုးခန်းခေါင်းများပါသောကြေးဝါရေချိုးခန်းလျှောဘားတွင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။...
တရုတ်နိုင်ငံ အပူထိန်းကိရိယာအရောအနှော ပေးသွင်း
အပူထိန်းကိရိယာရောနှောခြင်းအဆို့ရှင်ဟုခေါ်သည့်အပူထိန်းကိရိယာအရောအနှောကိုအရောအနှောဟုခေါ်သည်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုသည်အပူချိန်ကိုကြိုတင်မသတ်မှတ်မီရေပူနှင့်ရေအေးတို့ဖြစ်သည်။ အပူအအေးခံဆေးရောနှောသည့်အဆို့ရှင်သည်ရေပူနှင့်ရေအေးတို့၏ဖိအားကိုအလိုအလျောက်ချိန်ညှိပေးနိုင်ပြီးလက်ဖြင့်ချိန်ညှိစရာမလိုပေ။ ကရိယာအပူချိန်ကိုသတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သံသရာလည်ပတ်ပါ၊
ရေချိုးခန်းအပူထိန်းကိရိယာ Shower Taps